इटालीमा अत्यधिक गर्मी, युरोपकै अहिलेसम्मको उच्च तापक्रम मापन ! – Mission Khabar
इटालीमा अत्यधिक गर्मी, युरोपकै अहिलेसम्मको उच्च तापक्रम मापन !
मिसन खबर २८ श्रावण २०७८, बिहीबार १२:३६
काठमाडौं । इटालीको आइल्याण्ड सिसिलीमा गर्मी अत्यधिक बढ्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ। ४८.८ डिग्री सेल्सियस पुगेको सिसिलीको तापक्रम युरोपकै उच्च रहेको अनुमान गरिएको छ। क्षेत्रीय अधिकारीहरुले सो तापक्रम युरोपकै उच्च रहेको जानकारी दिएका हुन ।
यसलाई विश्व मौसम संगठन (डब्लुएमओ) ले भने प्रमाणिकरण गर्न बाँकी छ । डब्लुएमओका अनुसार अहिलेसम्म युरोपमा मापन भएको उच्च तापक्रम ४८ डिग्रि सेल्सियस रहेको छ । सन् १९७७ मा ग्रीसको एथेन्समा यो उच्च रेकर्ड बनाएको तापक्रम मापन भएको थियो। लुसेफर नाम गरेको एन्टिसाइक्लोनका कारण इटालीमा अहिले अत्याधिक गर्मीसहित तातो हावा (हिटवेभ) चलेको बताइएको छ । अफ्रिकाबाट आएको लुसेफरका कारण इटलीमा गर्मी बढेको आँकलन गरिएको छ । उच्च वायुमण्डलीय दबाबका कारण भूमरी बनेर हावा डुब्ने प्रक्रिया एन्टिसाइक्लोन हो। लुसेफर इटालीको मुख्य भूभाग तर्फ बढ्दै जाने पूर्वानुमान छ, जसका कारण तापक्रम अझै बढ्ने सम्भावनाको आँकलन भैरहेको छ।
राजधानी रोमसहितका शहरमा अबको केही दिन अत्यधिक गर्मी हुने बताइएको छ । इटालीको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तातो हावालाई मध्यनजर गरि विभिन्न क्षेत्रमा उच्च तहको चेतावनी जारी गरेको छ। तातो हावाका कारण सिसिली, कालाब्रिया, पुग्लियासहित दक्षिणी इटालीमा डढेलो समेत फैलिएको छ । यता, ग्रीसमा लागेको डढेलो तीव्र गतिको हावाका कारण गम्भीर बन्दै गएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक गर्मी, खडेरी बढेको र त्यसले डढेलो विस्तारमा सहयोग गरेको आँकलन गरिएको छ ।